Jereo izao tontolo izao ny horonantsary voalohany momba an'i Jesosy | Apg29
Jereo izao tontolo izao ny horonantsary voalohany momba an'i Jesosy
Izany no hany tanteraka horonantsary izay voarakitra ao amin'ny Baiboly toerana!
Avy amin'ny fihinanam-bilona amin'ny hazo fijaliana, dia ny horonantsary voalohany momba an'i Jesosy sy ny ihany no misy tena voarakitra ao amin'ny Baiboly toerana.
Indraindray Afaka ny ho Tena volamena hitany tao amin'ny Youtube. Ity horonantsary avy mangina 1912 no horonantsary voalohany momba an'i Jesosy! Izany dia midika hoe antsoina hoe "Avy amin'ny fihinanam-bilona ho an'ny Cross" ( "Avy amin'ny fihinanam-bilona amin'ny hazo fijaliana").
Izany dia avy amin'ny horonantsary Amerikana 1912 ary naka sary ny toerana tany Egypta sy tany Palestina ankehitriny.
Ny horonantsary voalohany momba an'i Jesosy
Avy amin'ny fihinanam-bilona amin'ny hazo fijaliana, dia ny horonantsary voalohany momba an'i Jesosy sy ny ihany no misy tena voarakitra ao amin'ny Baiboly toerana. Tao ny fotoana fahombiazana ara-barotra, izay voasoratra in-30 ao anatin'ny masonkarena.
Ny sarimihetsika dia milaza ny tantaran'ny fiainan'i Jesosy. Ny tale Sidney Olcott nasianao kintana koa ao amin'ny horonantsary. Mpilalao sarimihetsika sady mpanoratra Gene Gauntier nanoratra ny soratra sy aseho Maria Virjiny.
Poster ho an'ny sarimihetsika Amerikana Avy amin'ny fihinanam-bilona ho an'ny Vokovoko (1912).
Misy fisehoan-javatra ara-baiboly nampahafantatra tao amin'ny sarimihetsika. Ohatra, Jaona Mpanao-batisa nanondro avy i Jesosy no Mesia, fa isika kosa tsy mahazo mahita ny batisa. Koa satria ny lohatenin'ny ny sarimihetsika dia tena ara-bakiteny rehefa tonga hatramin 'ny farany. Cross tafiditra, fa tsy misy fitsanganan'ny maty.
Izany no ratsy loatra satria tsy misy fitsanganan'ny maty, dia misy ihany koa ny tsy misy famonjena. Fa i Jesoa Kristy dia tena nitsangana tamin'ny maty sy ny fiainana amin'izao fotoana izao ary rehefa mandray Azy dia hovonjena.
Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana.
Nadika tamin'ny teny 26 fiteny
Sidney Olcott no voalohany tena hahatakatra ny sarimihetsika hery sy nanao ny famokarana lehibe momba ny fiainan'i Jesosy ao amin'ny tany Palestina ankehitriny. Ny horonan-tsary dia lehibe fahombiazana ary nahazo famerenana tsara indrindra. Nadika tamin'ny teny fiteny 26, ary avy eo hadino tao fitsipika nesorina.
Nandritra ny filming lasa mpiasan'ny ny horonantsary iray niharan'ny halatra fikasana. Ny tale Sidney Olcott tsy nanana anjara ny tombom-barotra, izay in-30 ao anatin'ny masonkarena.
Navoaka tamin'ny 1919
Rehefa avy nividy Vitagraph Studios Kalem Studios no nanana ny sarimihetsika indray fanafahana tamin'ny 1919. Ny sarimihetsika navoaka tatỳ aoriana tamin'ny nanampy mozika sy ny fitantarana.
Ny sehatra izay nandeha teny ambony rano i Jesoa natao tamin'ny roa heny hatsiaka.
Ny voalohany po - ny horonantsary voalohany eran-tany momba an'i Jesosy
Avy amin'ny mpitantana ny hazo fijaliana
Avy amin'ny fihinanam-bilona ho an'ny Vokovoko (1912) Movie Mangina ny Review